Shina : Tohanan’ireo mponin’ny Aterineto Shinoa ny varotra fitaovam-piadiana hoan’i Zimbaboe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2008 9:55 GMT
Satria tsy mety tapitra ny krizy nateraky ny fifidianana tany Zimbaboe, sady izay koa i Robert Mugabe mifikitra amin'ny fitondrana, dia tsy mety mazava izay hiafaran'ilay sambo mirongo ireo fiadiana farany nafarana avy any Shina. Nahavelom-panontaniana ohatra ny fahatazanana ireo miaramila Shinoa any Mutare : hafiriana no hijanonany eto ary inona marina no andraikitr'izy ireo ?
Ny fanambarana ofisialy re avy any Shina dia manambara ireto fitaovam-piadiana ho toy ny ampahany amin'ny fifanekem-barotra efa nipetraka ka tsy manitsakitsaka mihitsy izay fepetra noraisin'ny Firenena Mikambana na lalàna Iraisam-pirenena hafa. Toherin'ny mponin'ny Aterineto Shinoa [netizens] maro ireo tsikera ireo sady ampangainy ho i Zamerika [USA] aza no tena mpanondrana fitaovam-piadiana be lavitra indrindra. Tsy dia nandrenesana tatitra firy momba ny fisian'ireo miaramila Shinoa any Zimbaboe ny andro lasa vitsy izay naleon-dry zareo nanindry mafy mikasika ny hoavin'ity varotra fitaovam-piadiana Shinoa ity; indreto adika eto ambany eto ny sangany amin'ireo hafatra izay napetraky ny mpamaky ho tohin'ireo lahatsoratra tamin'ny vohikala fampahalalam-baovao BBS [Bulletin board system] Shinoa sy mpanolotra vaovao isan-karazany hafa :
“Tena tsara fiantomboka izany; Tsy azo avela handoro trano amin'izao ireo izay eo am-pitondrana, anefa ny vahoaka amin'izany tsy manana izay handrehetana labozia akory!!!”
“Ny Imperialisma Amerikana dia tena ao ambadiky ny Dalaï Lama sy ny andiam-jiolahy “terôrista” izay mpiaradia aminy!!” Mitsangana amin'izao ianao ry Shina a!!!
“Dia maninona kay raha misy miaramila Shinoa mandehadeha any ?
Ianareo Amerikana,sy Anglisy ary Alemàna [anaram-bosotra fanesoana] ve afaka mandehadeha any Afghanistana, any Kôrea, any Japàna sy eran'izao tontolo izao, fa ny miaramila Shinoa tsy mahazo mandehadeha any Zimbaboe ? Izany ka atao hoe fomba fihevitra mitombona.”
“Tena ara-dalàna mihitsy ny varotra mifehy ity sambo iray feno fitaovam-piadiana Shinoa hoan'i Zimbaboe ity, tsy misy izay fahadisooan'i Shina mihitsy amin'ity raharaha ity.”
“Fihevitry ny jiolahimboto … dia isika indray ve no omeny tsiny satria tsy nahay nitazona ny tsiambaratelo mikasika ity varotra fitaovam-piadiana ity ?”
“Fa inona hay no olana amin'ny fivarotana fitaovam-piadiana e ? Tsy azo zoviana intsony ny habetsahan'ireo fitaovam-piadiana izay araraky ny Amerikana any Taiwan”
“Ireo fantsona fampahalalam-baovao dia mtoy ny mametraka maloto fotsiny eo an-dohantsika
Nahoana ary no dia maivana ny fanapariaham-peon'ny firenentsika ?”
“Izaho matoky fa halamin'ny fanjakana miadana ity raharaha ity; tsy sahala ny herin'ny fandresen-dahatr'ireo Tandrefana sy ny antsika!”
“Moa ve ny hoe ‘Tsy nisy izay fahadisoana nataontsika’ no mba hany azontsika avaly ?
Rehefa tonga ny andro izay tsy hamalian'i Shina tsikera mikasika izay mety ho fahalemeny
Amin'izay andro izay i Shina vao azo atao heverina ho isan'ireo sangany”
“Izay matanjaka ihany no manana ny rarainy amin'ity tany ity; rehefa afaka manajedaka an'i Amerika ihany i Shina vao hanana ny maha-izy azy. Raha tsy izany dia ho voaozona hataon'ireo fantsona fampahalalam-baovao Tandrefana tsinotsinona i Shina.”
“Mbola izay vitsy fotsiny no namidintsika dia efa mikorapaka ny vahoaka. Indrisy. Tena tsy manana izay maha-izy azy mihintsy isika. Angamba tsy dia hevi-dratsy loatra ny fivarotana ireny amin'i Ben Laden na ireo antoko mpanohitra Irakiana.”
“Aza miraharaha azy, aleo izy hilaza izay tiany hambara, fa amidintsika [foana] izay tiantsika varotana.”
“Tsy nisy izay fahadisoana nataontsika”
“Raikitra ary ! Entò eo imason'ny Firenena Mikambana ity rahara ity e, dia sady mikapoka totohondry madon-databatra no miteny hoe : ‘raha ho tohizanay ny fivarotana fitaovam-piadiana satria izany no mahamiramirana ny fonay. Dia hanao inona ary ianao ?’ ”
“Tena ara-dalàna ny fifanekem-barotra nifanaovan'i Shina sy i Zimbaboe, na dia izany aza dia mila mailò isika mandritra izao fotoana sarotra izao, mba tsy mora hararaotin'ny sasany”
“Ity dia porofon'ny fanaovan'ny Imperialista Amerikana mizana tsindrian'ila sady fikendrena antsika”
“Shina dia nanao tolokevitra ny ametraana ny ‘tsy fitsabatsabahana amin'ny raharaha anatin'ny firenen-kafa’, anefa dia toa i Shina ihany no mampihatra izany tokoa. Midimiditra amin'izay raharaha manerantany izao tontolo izao. Sarotra amin'i Shina ny hampihatra izay tolokeviny satria mifanipaka loatra izay fanaon'izao tontolo izao izany. Tokony hotohanan'i Shina ireo firenena sy fitondrana izay mba manohana azy sady manampy mba hampantanjaka azy ireny. Satria miankina amin'ny isan'ireo naman'i Shina no hampahalalaka ny làlana ho diaviny. Ny pôlitikan'ny ‘tsy fitsabatsabahana amin'ny raharaha anatin'ny firenen-kafa’ izay arahin'i Shina dia mbola endrika hafan'ny pôlitika mirindrim-baravarana ka manao azy ankila-baon'izao tontolo izao. Tamin'ny faha-17-n'ny volana, ny SABC, sy ireo radio rehetra, ireo gazety The Star sy The Citizen sy ireo fantsona fampahalalam-baovao rehetra [any Afrika Atsimo] dia samy mandrovy ivy nanapariaka momba ireo “fitaovam-piadiana Shinoa” izay tonga tany Afrika Atsimo saingy tsy navel hiantsona sy hotaterina any Zimbaboe.”
“Tena nanao hadalana vendrana ny “Poly” Corp !”
“Aiza fa ankehitriny na Afrika Atsimo [kely io aza] dia sahy mitifitra an'i Shina!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Tsy tokony ivarotantsika fitaovam-piadiana ry zalahy efa lomorina ireo.”
“Ara-dalàna ireo fivarotana fitaovam-piadiana Shinoa! Tsy tokony hisy adihevitra fa izay rehetra manakantsakana izany dia omen'i Shina famaizana! Ary raha ireo firenena Tandrefena no manao izany, dia hikaroka izay fomba hamaliana faty koa i Shina !”
“Tsy tokony atakalontsika izay tombom-barotra bitika toy izany ny maha-izy antsika. Ny orinasa izay manondrna ireo fitaovam-piadiana ireo dia tena hiteraka voka-dratsy maharitra hoan'i Shina.”
“Eny e, ara-dalàna iny fifanaraham-barotra iny, saingy tsy dia mendrika loatra. Ankilan'izany, Amerika koa aza mba nivarotra fitaovam-piadiana hoan'i Saddam tamin'ny fotoan'androny. Moa ve izay fitondrantena tsy mendrika ataon'ny hafa no fialantsiny tsika hanao toy izy ireny koa ? Maniry aho ny hiheveran'ireo mpiray tanindrazana amiko tsara momba izany.”
“Ireo fantsona fampahalalam-baovao tandrefana dia misarika ny mason'ny mpamaky lavitr'izay tena olana.”
“Manaonao foana ny governemanta, tsy misy fitsaharany ny hadalana tao anatin'ny taona iray monja !!?!! Andao hararaotina izao !!! Tena mahakivy ihany izany !!!”
“Tokony ataon'ny governemanta Shinoa izay ahatongavan'ireny fitaovam-piadiana ireny an-tsakany sy an-davany any Zimbaboe, raha tsy izany manombok'izao dia hisy fitsikerana mafy isak'izay manondrana fitaovam-piadiana i Shina.”
“Ny fanoherana be fahatany an'i Shina izay ataon'ny Tandrefana dia fanaovana antsika helo mba handratrana antsika”
“Ry Tandrefana tsinotsinona, tokony hividy fiaramanidina vaventy mpitatitra entana avy amin'ny Amerikana i Shina”
“Oadray, fa ianareo ve mihevitra fa tsy nivarotra fitaovam-piadiana mihitsy ny Amerikana taloha hatrizay”
“Tsy ara-dalàna hono rehefa ny Shinoa no mivarotra fitaovam-piadiana, saingy ara-dalàna rehefa ry zareo no manao izany, fomba fihevitra manao akory koa izany ?”
“Amerika no mpivarotra fitaovam-piadiana be indrindra eran-tany”
“Izaho indray manolotra sosokevitra ny handetehana ireo sambo mirongo fiadiana Amerikana hoan'i Taïwan !!!!”
“Fanalam-baraka fotsiny izany e ! Ny governemantanay Shinoa ve dia hahavita zavatra mahamenatrasy mamofady toy ny bala mipariaka ? Ny Amerikana ihany no mahavita izany e !!!”
“Hita eny rehetra eny ireo mpanohitra be fahatany an'i Shina.”
“Efa hatrizay hatrizay i Shina no mivarotra bala.”
“Amerika, atsaharò manombok'izao ny fivarotana fitaovam-piadiana any Taïwan!”
“Tokony tsy mitady fialantsiny isika
Rehefa misy vahiny mandray fepetra hanoheran antsika !!!!
Mila miaroizay tombontsoantsika isika !
Andao hihetsika !
Mila mandray fepetra dieny izao isika!”
“Amerika no mpivarotra fitaovam-piadaiana be indrindra eran'izao tontolo izao.”
“Afaka manomboka mametra ireo fivarotana fitaovam-piadiana Amerikana any Taïwan, i Shina”
“Ô ry Shina ! Mila matanjaka isika ! Mila mandray fepetra.”
“Tena fahadisoana bevava mihitsy ny tsy-fananantsika fiaramanidina fitaterana an'habakabaka”
“Ny tsy fananan'i Shina fiaramanidina vaventy mpitatitra entana no tena hadisoana”
“Firenena masi-mandidy i Shina, tsy nisy fahadisoana nataony.”
“Tsy ilaintsika halaina ho fahavalo izao tontolo izao.”
“Firenena ary amin'ny klasy ambany fahatelo ary ve dia mahasaky manohitra an'i Shina ?
Mila mianatra avy amin'i Putin, mba ho henjana kokoa i Shina.
Tsy sahin'ny olona hanihaniana intsony isika amin'izay”
Avy amin'i China.com :
“Miala any indray ny CNN”
“Tokony hanomboka hivarotantsika fitaovana koa ny Al Quaïda, aleo ry zareo no hifanazava amin'ny Amerikana sy ny OTAN”
“Somary mahazendana ahy ihany izy ity. Tsikeraina amin'izay rehetra zavatra rehetra mitranga izao i Shina na zony izany na tsia, sady atobaka amin'ny vahoaka Shinoa manontolo ny fahadisoana. Iza ihany no ao ambadiky ny fanodikodinantsaim-bahoaka ? Iza no mikendry an'i Shina ?!!”
“N'iza n'iza firenena mbola manohana an'i Shina, dia tokony hanomboka hivarotantsika fitaovam-piadiana bebe kokoa izy ireny”
“Firy ny tahan'ny tsenan'ny fivarotana bala izay an'ny Amerikana ? Anglisy ? Frantsa ? Ary ampaha-firiny ny an'i Shina ? Amin'ny maha “ozinin'izao tontolo izao” antsika, rariny mihitsy io tahan-tsena ankehitriny io. Ary rariny koa raha mihevitra ny hisongona ny Amerikana isika !”
“ “Tsy misy fahadisoana nataon'i Shina” Moa ve azontsika atsahatra hatreo ny fameremberenana izany ?”
“Ohatry ny tonga saina ihany aho fa tsy tokony ivarotantsika fitaovam-piadiana ireo firenena Afrikana efa ao anatin'ny hotakotaka, na manamorona izany. Tsy ampy ve ireo adim-poko maro efa misy any Afrika ?”
“F'angaha moa isika tsy fatra-pandala ny fandriampahalemana e ? Fahadisoana hatrany ny mivarotra fitaovam-piadiana amin'ny [izay efa fantatra fa] mpamono olona”
“Ianareo izany afaka mivarotra, fa izahay tsia ? Ianareo izany afaka mivarotra malalaka, fa izahay feperana ? Oadray izany loham-jiolahimboto ! Ilao ady ihany ange izahay raha tsy ivarotanay baomba atômika sy taterinay any Kioba e ! Ho hita amin'izay izay afitsokareo !”
“Androany mbola fitaovam-piadiana madinika no amidin'i Shina. Hitombo sy handroso kokoai zy atsy ho atsy. Tohany, tohany, tohany hatrany………
Maherezà ianao ry Shina”
“Iza no hifanamby amiko fa raha ry zareo no nivarotra fitaovam-piadiana tamin'i Zimbaboe, tsy hiloa-bava i Shina. Satria nahoana ? Fantatr'ireo “gwailos” [devoly vahiny] tsara izay antony”
“Nitsitsy tsy nananatra azy ireo isika dia jereo ankehitriny ny fiavonavonany !”
“Ny fakana tombony avy amin'ny fivarotana fitaovam-piadiana dia zavatra laha-janahary”
有卖原子弹 的吗?我要买 3个;
“Mivarotra baomba Atômika ve isika ? Mba omeo telo eo aho azafady”
“Miala any indray ny CNN, manapariaka tsaho maro mandratra hafa”
“Oadray, manombok'izao ny vohitany [Shina] dia an'ady amin'i Taïwan, koa raha misy sambo mizotra ho any Taïwan, afaka savain'i Shina izy ireny. Indrindra indrindra ireo satana Japôney na Amerikana . Raha Shinoa ianao, tsindrio ity hafatra ity.”
“Mila fiaramanidina vaventy fitaterana an'habakabaka maromaro sy andiam-piaramanidina mpiady amin'ny fomba maika i Shina !”
“Mila henjana kokoa isika amin'ny toe-javatra toy itony.
Nahoana ? Satria tsy mahasahy miatrika ireo firenena mandroso toa an'ny USA, Frantsa na Anglisy isika, ary raha toa ka izay firenen-drehetra mitovitovy halehibe na kely rehetra izao dia hila vaniny amintsika, tsy misy hanaja antsika intsony.”
“Mila fiaramanidina fitaterana an'habakabaka mba hiarovany ireo tombotsoany i Shina !”
“Aiza ve rangahy fa na dia i Afrika Atsimo kely io aza dia mahasaky mitifitra an'i Shina ankehitriny ? Heveriko fa mila mandray anjara amin'ny ady indray mandeha isika mba [hahitan'ny hafa ny herintsika sy] hanajan'ireo firenen-kafa antsika ho toy ny sangany amin'ireo firenena !!!!”
Lohahevitra tena mavaivay sady tena mavitrika tokoa ireo mponin’ny Aterineto [Shinoa ny ankabeazany] satria mbola mitohy ao amin’ny “lahatsoratra nadika” ireo adihevitra ka efa mihoatry ny 40 sahady ny isan’ireo hafatra.
24 Avrily 2008, 10:58